October 2018 - Mero HeadlineThe News portal of Pokhara
कास्की काँग्रेसले कात्तिक २० गते शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान गर्ने
पोखरा, १४ कात्तिक । नेपाली काँग्रेस कास्कीको बुधबार बैठक बसेको छ ।
बैठकले दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत्, छठ, ल्होसारको अवसरमा कात्तिक २० गते पार्टी कार्यालय चिप्लेढुङ्गामा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सदस्य नवीन सिग्देलले जानकारी दिए ।
बैठकले नेकपाका कार्यकर्ताले सर्लाहीमा काँग्रेस कार्यकर्तालाई गोलिहानी हत्या गरेको घटनाको भत्सर्ना गर्दै हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।
साथै बैठकले भूपू सैनिक संघ कास्कीका अध्यक्ष क्या. टिकप्रसाद गुरुङ, नेपाली काँग्रेस लाहाचोकका संस्थापक सभापति डिल्लिराम अधिकारी, पोखरा – ३३ भरतपोखरीका सहसंयोजक सरोज अधिकारी, पूर्व कार्यालय सचिव मोहन गिरी, नेपाल तरुण दल मिजुरेडाडाँका अध्यक्ष मनोज गुरुङ र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हिमानन्द बस्ताकोटीको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैठक कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
पोखरेली तमुहरुले सामुहिक रुपमा तमु ल्होछार÷ल्होसार मनाउने
पोखरा । पोखरेली तमुहरुले विगतका वर्षहरुमा झै सामुहिक रुपमा तमु ल्होछार÷ल्होसार मनाउने भएको छ। बुधवार पोखरामा सम्पन्न तमु संघ संस्थाहरुको बैठकले कुकुर वर्ग(खि ल्हो)को विदाई र मृग वर्ग(फो ल्हो) आगमनको अवसरमा तमु ल्होछार÷ल्होसार सामुहिक रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो।
पोखरा ९ नयाँबजारस्थित तमु धिं नेपालमा सामुहिक ल्होछार÷ल्होसार समितिका संयोजक तमु ह्युल छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका ४ नं प्रदेश संयोजक दलबहादुर तमुको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तमु जातिको महान चार्ड विगतमा जस्तै एकताको सन्देश दिदै मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकल उक्त समितिको आर्थिक संयोजकमा तमु धिं नेपालका कोषाध्यक्ष सुवेदार मेजर श्रीप्रसाद तमुलाई चयन गरेको छ।
विगत लामो आन्दोलनबाट राष्ट्रिय चार्ड ल्होछार÷ल्होसार वा तमुहरुको वर्षका दिन पुस १५ मा प्राप्त विदा कटौती फिर्ता गराउन माग गर्दै सामुहिक तमु ल्होछार÷ल्होसार समितिले प्रदेश नं. ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। विगतमा प्राप्त विदा कटौती गरिनु दुखदायी हो, प्रदेश सरकारसँग पुस १५ मा विदा, प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई कामकाजको भाषासहितको मागका लागि मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने संयोजक दलबहादुर तमुले बताउनुभयो। सामुदायिक अधिकार र एकताका लागि सबै तमु संघ संस्थाहरुलाई सामुहिकतामा जुट्न उहाँको आग्रह समेत रहेको थियो।
तमु ल्होछार÷ल्होसारलाई एकता, समानता, सद्भाव, साँस्कृतिक पर्वको रुपमा सामुहिकतामा विगतदेखि पोखरेली तमु संघ संस्थाहरुले मनाउदै आएको र यसवर्ष मात्रै होइन आगामी वर्षहरुमा पनि सामुहिक रुपमा मनाउदै जाने तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुले बताउनुभयो।
बैठकमा पोखरेली विभिन्न तमु संस्थाहरुका प्रतिनिधीहरुको संस्थागत सहभागीता रहेको थियो।
पेन्टिङ गर्ने क्रममा खस्दा एकको मृत्यु
पोखरा । कास्कीको सराङकोटमा निर्माणाधिन होटल बाराही रिसोर्टमा पेन्टिङ गर्ने क्रममा तेश्रो तलाबाट खस्दा मकवानपुर होटौडाका २५ वर्षिय राजकुमार मगरको मृत्यु भएको छ । पेन्टिङ गर्ने क्रममा तेश्रो तलाबाट भुइमा खसेपछि तत्काल उपचारको लागी पोखराकोे मणिपाल हस्पिटल लगिएकोमा डाक्टरले चेकजांच गर्ने क्रममा मृत घोषणा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना पश्चात प्रहरीले निर्माणधिन रिसोर्टमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पोखरामा पर्खाल र गारो भत्किदा ३ घाइते
पोखरा । पोखराको बास्तोलाथरमा घरको कम्पाउण्डिङ गरेको पर्खालमा खेल्ने क्रममा पर्खाल भत्किदा दुइजना वच्चा घाइते भएका छन । बास्तोलाथर इन्द्र प्रसाद बास्तोलाको घरको कम्पाउण्डिङ पर्खालमा खेल्दै गर्दा एक्कासी पर्खाल भत्किदा सोही ठाउ बस्ने ५ वर्षिय गौरब थापा र ७ वर्षिय शुशान्त पोख्रेल घाइते भएका हुन । घाइतेहरुको पोखराको फिस्टेल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान समेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पोखरा १० राममार्गमा अनिता तिमिल्सिनाको घरको पानी ट्याङकीको गाह्रो लगाएर आर सि टी जाली बुन्ने वेलामा गारो भत्किदा पोखरा १५ लक्ष्मी टोल बस्ने महेश कुमार राइ घाइते भएका छन । गारो भत्किएर च्यापिएको अवस्थामा राइको उद्धार गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखरा, १४ कात्तिक । चीनको यिपिन सहरका उपमेयर चाङग फिङग र पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीको बुधबार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा उपमेयर फिङगले बन्दै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे चासो देखाएका छन् । उनले विमानस्थल पूरा भइसकेपछि यिपिनबाट पहिलो उडान भर्न चाहेको मनसाय व्यक्त गरेका छन् ।
गत असोजमा यिपिन र पोखराबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएपछि यिपिनका उपमेयरसहित ७ सदस्यीय टोली बुधबार पोखरा आएको हो । उनले पोखराका मयेर मानबहादुर जिसीलाई महानगरलाई विकास गर्नु छ भने पहिले कृषिलाई भन्दा पर्यटनलाई जोड दिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘पोखरा साच्चिकै सुन्दर छ । यहाँ आइपुग्दा हामीलाई घरमै आइपुगेको जस्तो आभास भयो । त्यसैले यहाँ कृषिको भन्दा पहिले पर्यटन विकासमा लाग्नुस् ।’ उनले पोखरामा खिचेको फोटो यिपिनमा पठाउँदा सबै ढंग परेको सुनाए ।
विद्यालय सवारी चालकलाई ट्राफिक सचेतना ट्राफिक नियमको पालना नहुदाँ सवारी दुर्घटना बढे
पोखरा १४ कात्र्तिक । ट्राफिक नियमको पालना गरे सवारी दुर्घटनामा न्यूनिकरण हुने पोखरामा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले मन्टेश्वरी एशोसियसन कास्कीको आयोजना र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विद्यालय सवारी चालकका लागि आयोजित ट्राफिक सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै कास्कीका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख ऐनबहादुर मल्लले टाफिक नियमको पालना नगर्दा सवारी दुर्घटना बढेको बताए ।
उनले सवारी दुर्घटनाको अवस्था भयावह रहेको बताउदै त्यसको न्यूनिकरणका लागि नियमको पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमानेको संख्या धेरै रहेको बताउदै दश वर्षे जनयुद्धमा भन्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका सवारी दुर्घटनाबाट धेरै क्षति भएको छ । दश वर्षे जनयुद्धमा १५ हजारले ज्यान गुमाएको तथ्याङक रहेको छ भने पछिल्लो पाँच वर्षमा १० हजारको मृत्यु भएको र २० हजार गम्भिर घाइते भएको प्रमुख मल्लले बताए ।
उनले ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा दुर्घटना हुने गरेको बताउदै त्यसका लागि सवारी चालकहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार महासंघ कास्कीका सदस्य एकराज गिरीले सवारी दुर्घना न्यूनिकरणका लागि ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले नियमको बारेमा जानकारी हुदाहुदै पनि त्यसको पालना नगर्दा सवारी दुर्घटना हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायव निरिक्षक शिव पाठकले सवारी दुर्घटनाका कारण, ट्राफिक नियम, जरीवाना र सजायका बारेमा चालकहरुलाई जानकारी गराएका थिए । सचेतना कार्यक्रमका संयोजक एवं मन्टेश्वरी एशोसियसन कास्कीका सदस्य जर्नादन सुवेदीले ६५ प्रतिशत बालबालिका सवारी मार्फत विद्यालय जाने भएकाले ट्राफिक नियम पालनाका लागि सवारी चालकहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रम मन्टेश्वरी एशोसियसन कास्कीका अध्यक्ष अरुणा शेरचनकोक अध्यक्षतामा भएको थियो भने संचालन सचिव सविता कोइरालाले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा पोखरामाभित्र संचालनमा रहेका ४० वटा मन्टेश्वरीका सवारी चालकहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
दिदीले बहिनीलाई अन्यायमा पारेको भन्दै महिलाहहरुले मुख्यमन्त्री र उपसभामुखलाई जानकारी गराए ।
बाबुलाई पति र हजुरबालाई ससुरा बनाएर जग्गा जति आफ्नै नाममा
समाजसेवी पवित्रा गुरुङको पहलमा विगत देखि दुर्गा कुँवरको पक्षमा अदालतले पनि दिदी रत्नाकुमारी शाहकै पक्षमा फैसाला गरेपछि स्थानिय महिला र माजसेवीले यसको विरोध गरीरहेका छन् । अभियानकर्ता पवित्रा गुरुङले २०÷२२ वर्ष जेठी दिदीले जालसाजी गरि सम्पुर्ण कागजात आफ्नै पक्षमा पारेकाले कानुनी हिसाबमा दुर्गा चुकेको बताउनुभयो ।
दुर्गा कुँवर पोखराको रामबजारमा थोत्रो घरमा बस्दै आउनुभएको छ । जुनघरमा बसेको ४३ वर्ष भयो । दुर्गाका बाबा भारतीय रेलवेमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यहिबाट कमाएको पैसाले पोखराको रामबजारमा घरजग्गा जोड्नुभयो । घरजग्गा मात्रत्र जोड्नुभएन त्यतिबेलापनि छोरी रत्नाकुमारीलाई राम्रो सँग पढाउनुभयो । रत्नाकुमारी २२ वर्ष हुँदा बल्ल दुर्गा जन्मीएकी थिईन् । आफु बुझ्ने भएपछि रत्नाकुमारीले जालसाजी गरि सबै कागजपत्र मिलाएर उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याईन र चुपचाप बसीन् । जब दुर्गा बढ्दै गईन् यहि बिचमा रत्नाकुमारीको बिहे भयो । उनि आफ्ना लाहुरे पतिसँग ब्रिटीस गईन् ।
तर दुर्गा बिहे नगरि घरमा बा आमाको रेखदेख गरेर बसीरहीन् त्यतिबेलासम्म पनि थाहा भएन की जग्गा दिदीको नाममा छ । बा आमाको देहवसान भयो दुर्गाले काजकिरीया गरिन् तर रत्ना फर्कीईनन् । २०६१ सालमा आएर दिदीले बहिनीलाई यो मेरो सम्पति हो त्यसैले घर निस्कनु भनेपछि दुर्गा कुँँवर छाँगाबाट खसेझैँ भईन् अनि अदालत जाने निधो गरिन् तर मुखबाट बाबा आमा भन्न नसिक्दै हातले कखगघ लेख्न नजान्दै दिदी रत्नाकुमारीले बनाएका प्रमाणका अगाडी दुर्गाको केहि लागेन जिल्ला अदालत कास्की र उच्च अदालत पोखराले दिदीकै पक्षमा फैसाला गरिदीयो । तर रामबजारबासी बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी बाहेक दुर्गा अन्यायमा परेको कसैले देखेन ।
मिडिया सोशाइटीका अध्यक्ष तथा एबिसी टेलिभिजनका प्रमुख शुभशंकर कँडेल अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष तथा एबिसी टेलिभिजनका प्रमुख शुभसंकर कँडेल अस्पताल भर्ना भएका छन । अत्यधिक टाउको दुख्ने समस्या बढेपछि कँडेल मंगलवार काठमाण्डौको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका हुन । केही दिनदेखी टाउको दुखाइ बढ्दै गएपछि अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको हो ।
कँडेल गत २०११ देखि अत्यधिक टाउको दुख्ने समस्याबाट ग्रसित छन । चिकित्सकले कँडेलमा अननोन हेडयाच भएको जनाएका छन । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार कंडेललाई अझै दुइ दिन अस्पतालमा राखिने एबिसी टेलिभिजनका प्रशासकीय प्रमुख इन्द्र प्रकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
कन्दरा व्याण्डका सुनिल थापा पोखरा सांगीतिक कलाकार संघको अध्यक्ष
। पोखरा सांगीतिक कलाकार संघ नेपालको तेह्रौं साधारण सभा तथा छैटौं अधिवेशनले सुनिल थापा(हर्कबहादुर)लाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । कन्दरा व्याण्डका ड्रमरसमेत रहेका संगीतकार थापालाई अधिवेशनले अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।
लक्ष्मी पुजाको दिन सातौ संस्करणको दीप सांझ
दिप साँझ २०७५ सातौँ संस्करण लक्ष्मी पुजाका दिन
पोखरा, ११ कात्तिक । दिप युनाईटेड क्लव पोखरा १६ को आयोजनामा सातौँ संस्करणको दिप साँझ २०७५ यहि कात्तिक २१ गते बुधबार हुने भएको छ । लक्ष्मिपुजाका दिन हुने उक्त साँझको आवाश्यक तयारी थालिएको क्लवले आईतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएको हो ।
कार्यक्रम मार्फत बचत हुने रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरिने क्लवले जनाएको छ ।